Lekwasị anya na oru ọkụ kpo oku Huozhou
Shanxi Huozhou ụlọ ọrụ na -ekpo ọkụ Huozhou “ihe nrụpụta atọ na otu ụlọ ọrụ” ọrụ mmezi ọkụ, Dị ka valvụ sonyere na mgbanwe ọrụ ahụ na June 2020, nke “ihe atọ na otu ụlọ ọrụ” na -ezo aka na mmiri, ọkọnọ ike, kpo oku na njikwa ihe onwunwe. mpaghara ezinụlọ nke ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ gọọmentị (gụnyere ụlọ ọrụ etiti na ụlọ ọrụ steeti nwe obodo). “Ihe atọ na otu ụlọ ọrụ” nkewa na nnyefe na-ezo aka ọrụ njikwa nwere amụma siri ike na nka, mkpuchi sara mbara yana ọrụ dị oke mgbagwoju anya nke ụlọ ọrụ steeti (gụnyere ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ nyocha sayensị) kewapụrụ mmiri, ọkụ eletrik na njikwa ihe ọkụ. na-arụ ọrụ na mpaghara ezinụlọ site na ụlọ ọrụ gọọmentị wee nyefee ha na ngalaba ọkachamara mmekọrịta maka njikwa.
Dị ka valvụ nke Huozhou kpo oku oru ngo tumadi na -enye valvụ urukurubụba ,valves eletriki na valvụ bọl welded.
Foto ntinye (1)
Usoro njikọ nke valvụ urukurubụba eletrik
Ihe kachasị: ụdị flange na ụdị wafer; Ọnọdụ akara nke valvụ urukurubụba eletrik na -agụnye akara rọba na akara igwe. Ìhè mgbaama ọkụ na -egosipụta n'oge mmeghe na mmechi valvụ urukurubụba eletrik. Enwere ike iji ngwaahịa a dị ka valvụ nkwụsị na valvụ na -achịkwa valvụ sistemụ. Site na iji oghere na mmechi akwụkwọ ntuziaka, ozugbo agbanyụrụ ọkụ, enwere ike iji ya rụọ ọrụ na -emetụtaghị ngwa ahụ.
Ụkpụrụ ọrụ nke valvụ urukurubụba eletrik
Ike ọkọnọ na -arụ ọrụ na -agụnyekarị: AC220V, AC380V, wdg. Ntinye ntinye: 4 ~ 20mA, 0 ~ 10V na akara ndị ọzọ adịghị ike ugbu a. Mgbe ejikọrọ igwe eletriki eletriki na mkpanaka valvụ jikọtara ya ma mebie ya; Jiri ike eletriki dị ka ike na -anya ụgbọ ala valvụ nke urukurubụba maka ntụgharị ihu 0 ~ 90 Celsius. Nweta akara ngosi 4 ~ 20mA site na sistemụ njikwa akpaaka ụlọ ọrụ iji chịkwaa akara mgbanwe valvụ nke ọma, ka ị wee nweta ụkpụrụ na njikwa nke oke ihe dị iche iche dị ka mmụba, okpomọkụ na nrụgide.
Njirimara teknụzụ nke valvụ bọọlụ welded
1. A na -agbado usoro ahụ valvụ na -enweghị mgbapụta mpụga.
2. Ogwe valvụ nwere mgbaaka akara PTFE na mmiri, nke nwere ike na -agbanwe nke ọma na mgbanwo na mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ ma ọ gaghị emepụta mgbapụta ọ bụla n'ime oke ojiji.
3. Ọdịdị mgbochi mgbapu nke valvụ valvụ nwere otu ptket mkpuchi mkpuchi onwe yana otu O-mgbanaka na ala valvụ valvụ, mgbanaka O abụọ na pket abụọ PTFE iji hụ na enweghị mgbapụta.
4. Ihe ngwongwo valvụ ahụ na nke pipeline, ọ gaghị enwekwa nrụgide na -enweghị isi, ịpụ na mbibi n'ihi ala ọma jijiji na ụgbọ ala na -agafe n'ala.
5. Ahụ valvụ dị mfe ma dị mfe ịnwe ọkụ.
6. Enwere ike lie valvụ bọọlụ ahụ ozugbo lie n'ime ala na -ewughị nnukwu valvụ ọma. Naanị obere olulu mmiri na -emighị emi ka a ga -edobe na ala, nke na -azọpụta nnukwu ụgwọ ụlọ na oge injinịa.
7. Enwere ike ịhazigharị ogologo valvụ ahụ na ịdị elu nke eriri valvụ dị ka ihe owuwu na ihe chọrọ chọrọ nke ọkpọkọ.
8. Izi ezi igwe nke okirikiri a kapịrị ọnụ, ọrụ ya bụ ọkụ, enweghị nnyonye anya ọ bụla.
10. Enwere ụdị njikọ abụọ: ịgbado ọkụ na flange.
11. Ọnọdụ ọrụ: aka, gia (vetikal / kehoraizin)
12. N'okpuru ọnọdụ nke ịrụ ọrụ nkịtị na iji valvụ, oge ikike bụ afọ 20.
Structure nke welded bọl valvụ
1. The valvụ adopts carbon ígwè enweghị nkebi ígwè anwụrụ enwe integral welded bọl valvụ.
2. Ogwe valvụ ahụ bụ AISI303 igwe anaghị agba nchara na valvụ ahụ bụ AISI304 igwe anaghị agba nchara. Emere ya site na -egwe ọka ma nwee ọmarịcha akara akara yana nguzogide corrosion.
3. Akara ahụ na -anabata mgbanaka akara mgbatị PTFE nwere katọn siri ike, nrụgide na -adịghị mma dị na gburugburu okirikiri, nke mere na akara ahụ nwere uru nke mgbapụta efu na ogologo ọrụ ndụ.
4. Ụdị njikọ nke valvụ: ịgbado ọkụ, eri, flange, wdg maka ndị ọrụ ịhọrọ. A na -anabata ọnọdụ nnyefe: njikwa, tobaim, pneumatic, eletriki na akụkụ nnyefe ndị ọzọ, ngbanwe ahụ na -agbanwe agbanwe na ọkụ.
5. The valvụ nwere uru nke kọmpat Ọdịdị, ìhè arọ, mfe okpomọkụ mkpuchi na mfe echichi. A na -etinyekarị valvụ a n'ụzọ kwụ ọtọ.
6. A na -emepụta valvụ agbakwunyere agbakwunyere agbakwunyere site na ịmịpụta teknụzụ mba ọzọ yana ijikọta ya na ọnọdụ China n'ezie. A na -eme ya na China kama ibubata ya iji mejupụta oghere ụlọ. A na-ejikarị ya eme ihe n'ọhịa pipeline dị anya dị ka gas, mmanụ ala, kpo oku, ụlọ ọrụ kemịkalụ na netwọ ọkpọ ọkpọ ọkụ.
Foto saịtị (1)
Foto saịtị (2)
“Ngwaọrụ atọ na otu ụlọ ọrụ” na-enyere aka ibelata ibu nke ụlọ ọrụ steeti ma lekwasị anya na mmepe nke isi azụmaahịa. Ọ dịkwa mma maka ijikọ akụ, mgbanwe na nkwalite akụrụngwa wee meziwanye ebe obibi ndị ọrụ. Dị ka valvụ na-agbasokarị nkà ihe ọmụma ụlọ ọrụ nke "iguzosi ike n'ezi ihe, imepụta ihe ọhụrụ, imekọ ihe ọnụ na mmeri", jiri njiri mara ngwaahịa na afọ ojuju ndị ahịa wee were onwe ya jupụta onwe ya na nchụso na-enweghị nkwụsị na mmepe na-adigide.
Oge nzipu: Jan-13-2022